umculi baziwa Ani Lorak, biography okuzokwenziwa achazwe kulo magazini, kanye nezinye abaculi abaningi besikhathi sethu abaye kokuthola iziqu noma impumelelo nothando jikelele, ababengalazi kusukela ebuntwaneni, okuyinto efuna nikela konke ukuphila kwakhe. Naphezu kweqiniso lokuthi isiphetho ibilokhu ingeyona wamphatha ngomusa, wakwazi ukuze uqaphele iphupho lakhe.
Ani Lorak: Biography - wakhula kanzima
Igama samanje avela kuye lo oculayo - Carolina, isibongo - Quek. Wazalelwa 1978 ngo-September 27 edolobheni elincane elibizwa ngokuthi Kitsman (Chernivtsi esifundeni Ukraine). uyise wentombi kwaba intatheli, umama - the ummemezeli emsakazweni. Ngisho engakazalwa ngendodakazi yakhe umbhangqwana uhlukana, umama ayikwazanga unake ngokwanele ukuba zonke izingane abekade onamalungu amane (Carolina kwadingeka abafowethu abathathu, omunye wabo wabulawa Afghanistan), futhi zize zifike ebangeni intombazane lwesikhombisa wakhulela isikole boarding. Isifiso ube umculi odumile ngesikhathi Carolina wabuya e eneminyaka emine ubudala, ekhumbula ukuthi ngaso sonke isikhathi into avungazelayo. Futhi Ngangingazi ngaleso sikhathi, ukuthi uma akuyona Carolina, futhi Ani Lorak.
Umculi Biography: umlando igama esiteji
Ngo-March 1995, ezikrinini out ukudluliswa entsha, ngokuthi "inkanyezi yokusa." Emncintiswaneni abadlali abasha iqhaza futhi Carolina Quek. Kodwa abagqugquzeli yathola ukuthi uhlu kwabo abadlali ababili elinegama Carolina - abavela eRussia nase -Ukraine (umculi weyezokwenza ngaphandle isimemezelo amagama). Ngemva kokucabangisisa kakhulu sendlela ngibe kulesi simo, futhi mass sokudlulisa iziteketiso enze ngaphansi okuyinto njengoba umculi osemusha, watholakala indlela yokuphuma isimo - igama lakhe ifundwa kusuka kwesokudla kuya kwesokunxele, nesi-Ukraine Carolina baba Ani Lorak.
Biography avela kuye lo oculayo: impumelelo lokuqala nodumo
Ngokusho imiphumela umculi Emncintiswaneni ubelokhu eqashelwa njengoba ukutholakala okurarako, futhi yaklonyeliswa "Golden Firebird". Festival "Ruta", owawusedolobheni eCrimea ngo efanayo 1995, wanika ithuba Carolina ukukhombisa amakhono abo vocal, futhi sasizazisa - umculi uthethe indawo yesibili.
I-albhamu yokuqala Ani Lorak emhlabeni wabona ngo-1996, kwesibili - ngo-1997, ngemva kwalokho lo oculayo waqhubeka uhambo e-Europe, lapho wamukela futhi sithandwa.
Ngo-1999, Ani Lorak eneminyaka engu-eminyakeni engu-19, waklonyeliswa isihloko Umculi Ezigcwalisiwe Ukraine. Ngesikhathi esifanayo waqala ngokubambisana neNhlangano umqambi Russian igor krutoy, okuyinto wanika izilaleli eziningi hits entsha. Unyaka 2002 waba unyaka ukuqashelwa ngoba Anya - wayewukuphela umculi engcono ye-Ukraine.
Ngo-2008, ngaphansi kobuholi buka Filippa Kirkorova Ani Lorak okwakudingeka ayenze Eurovision Song Contest, eyaqala yesibili (kuqala - Dima Bilan).
-Charity futhi Ani Lorak: Biography
Ukuphakama umculi efanele, kuyanda crazy, simatasa ukuvakasha isheduli akuvimbeli ke kusukela ekubeni nomusa, Ani ayivumeli thina sikhohlwe ukuthi kunabantu abadinga usizo. Ani Lorak uba Sokuthakazelelwa Ambassador we-UN futhi esiza ekunakekeleni abantu abane-HIV e-Ukraine. uvakashele njalo izingane emakhaya ezintandane, zibancishe abazali ababonisa ngayo uthando, kuyinto yomnikeli e yokufuna imishini kwezokwelapha, isuswe senhlalo. ukukhangisa.
Ani Lorak: Biography - Umndeni
Ngo-2003, ngesikhathi iholide e-Turkey, umculi wahlangana Murat Nalchadzhioglu (co-umnikazi tour opharetha Turtess Izikhangibavakashi), ngawo baqala nomakhwapheni. Ngo-2004, Murat kuhanjiswe ku-Ani ku Ukraine, futhi abathandi ngokusemthethweni washada eminyakeni emihlanu kamuva. Ngo-June 2011, uCaroline Murat baba abazali - wazalwa indodakazi yabo Sofia.
Biography Anna Pletnev - indaba emangazayo abesifazane yimpumelelo
Kungani ukuhlukanisa iqembu "Hands Up"? What do Sergei Zhukov futhi Aleksey Potehin eceleni
Kanjani futhi kuphi wathwebula isiqophi Faded (Alan Walker)
Kukangaki udinga umculo bass clef
Daniel Matseychuk - party elikhanyayo iqembu Flamboyant Quest Pistols
Volchikhinsky kwesigubhu, indlela ukuya emabhishi ayo
Umthengi wokubambisana - Iyini? Credit kanye umthengi wokubambisana
Bangobani - twins Raskolnikov? Luzhin - Raskolnikov double
Incazelo Sheehan Syndrome: Ihlahlubo, Izimpawu, Ukwelashwa
Impahla inert ekwakheni: izinhlobo, izici, izimo ekalishi
Bottle "Avent" izingane
Imithetho yemali ukuthengiselana: ukuhlaziya noma ukubona ezinye zezinguquko
Viktoria Bonya ngaphambi nangemva lip plastic
Rehberg isampula nesineke unikela omunye sposobobov eziningana, ku iseluleko udokotela
Dandruff: izimbangela nezindlela emzabalazweni
Ilogo: izinhlobo logo. amalogo Inkampani. logo ekudalweni
Ukugunyaza. Ubuqiniso-Windows - indlela ukukhubaza ahlukahlukene yesistimu yokusebenza izinguqulo